Tuesday March 19, 2019 - 10:06:04 in Maqaallo by saleban Cilmi
oollanka dublamaasiyadeed ee Geeska Africa ka dhex socda oo soo Istaadhmay bilowgii hoggaaminta Dr Abiy Ahmed, Raysal Wasaaraha Ethiopia wixii intaasi ka danbeeyay waxay isku soo dhawaaday dawlado kala quustay iyadoo heshiisyo midho dhal ahna qaar ay kala saxeexdeen. Haddana iyadoo taasi jirto waxa kasoo dhex baxay Dhaqaaqa Dublamaasiyadeed ee Geeska Africa fursado dahabi ah oo la odhan karo Jamhuuriyada Somaliland dan weyn baa ugu jirta; Hadaba Sidey Somaliland Amuurtaasi u Wajahday ? Waa Suaal Macquul ah oo ay iswaydiiyaan dadka xiiseeya ama odorosa Siyaasada Geeska.
Akhriste waxa ii baxay In xukuumada Somaliland ee uu horkacayo Madaxweyne Muuse Biixi in ay ku guulaysatay Siyaasadeeda khaarajiga ah isla markaana saamayn taban ku yeelatay geeska africa, iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda ka saaran arrimaha gudaha isla markaana dhowraysa go'aanka qarranimadeeda.
Maqaalkaygan waxaan kusoo xidhayaa hal -ku dhigga xukuumada ee "Horaa loo Soconayaa”